Nkọwa:2x4 Led Troffer Light Fitting,Ebube na-agbanye ọkụ,2x4 Led Troffer 5000K
Home > Ngwaahịa > Enwusi Ìhè > 2x4 Na-enwusi Ìhè > 2x4 50W Led Troffer Light Fixture 5000K
Ihe Nlereanya.: BB-RTGD-50W-A-24-D
NKWU NKE ENERGY - Nke a 2x4 Led Troffer Light Fixture 50W na-enye 6500 Lumens na 5000K Day White. Nke ahụ bụ ọrụ ọkụ arụmọrụ nke 130lm / w! Ego ntinye ego nke ruru 80% n ' ugbua Ogoro anyi. Ihe 2x4 Led Troffer 5000K dị mma iji dochie omenala L ed Panel Light 2x4 .
AKWỤKWỌ MKWUKWU - Ụdị ọkụ a na-emepụta n'oge a bụ L ed Edemede ọkụ na- emepụta ihe dị iche iche na-emepụta nguzozi zuru oke nke ntanaka na ikuku. Nyocha elekere PC kachasị mma na-anapụta ìhè dị ala, edozi ọkụ.
DIMMABLE - L ed dobe N'uko Ìhè 2x4 bụ 0-10V dimming. Onye ọkwọ ụgbọala dị elu na-adaba na ọtụtụ n'ime ndị na-enweghị onye ọ bụla na-enweghị ọkụ ọ bụla a na-achọghị, nke na-egbuke egbuke ma ọ bụ nke na-ama jijiji.
NTỤKWU ỤBỤRỤ NA NTỤTA - Nkọwa dị ala na ìhè dị ọkụ L ed 2x4 Igodo dị mfe iji aka ma tinye kpọmkwem n'ime ụlọ na-eme ka a na-etinye ya na T-mmanya.
Ohere nke a ga - enweta - Bbier 50W L Lụrụ Akara Ụlọ Elu Lights bụ DLC Na - atụgharị ma si otú ahụ ruo eruo maka nchịkọta obodo na mba niile.
Ngwaahịa : Enwusi Ìhè > 2x4 Na-enwusi Ìhè
2x4 50W Led Troffer Light Fixture 5000K Kpọtụrụ ugbu a
Ebube ụlọ ọrụ 2x4ft duhiere ọkụ ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
2x4 Led Troffer Light Fitting Ebube na-agbanye ọkụ 2x4 Led Troffer 5000K